दुबै मृगौला फेल भएकी रञ्जना तामाङलाई आयो क्यानडाबाट आर्थिक सहयोग - Fonij Korea
लेखक: बिमल सिं लामा	| प्रकाशीत मिति: April 18, 2021
काठमाडौ । दुबै मृगौला फेल भएकी तेमाल गा.पा. वडा नं. ९ पालुघाट निवासी कान्छामान तामाङको छोरी रञ्जना तामाङका लागि क्यानडामा संकलित आर्थिक रकम हस्तान्तरण गरेको छ । क्यानडामा बसोबास गर्दै आएका सोही गाउँका बिरवल लामाले त्यहीँ रहेका नेपाली साथीहरुबाट संकलन गरेको रकम रु १ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको हो ।
शनिबार (बैशाख ४) बिरवल लामाको बुवा सोनाम लामा र बहिनी बिना लामाको हातबाट बिरामी रञ्जना तामाङलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । बिरामीको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गत महिना देखि युथ फोरम पालुघाटले आर्थिक संकलन अभियान संचालनको थालनी गर्दै विश्वभरी रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगका लागी आव्हान गरेको थियो । यसै अभियानलाई साथ दिदै क्यानडामा रहेका बिरवल लामाले आफ्नो साथीभाइहरुसंग आर्थिक संकलन गरि पठाएको हो । क्यानडामा संकलित १४३२$ (चौध सय बत्त्तिस क्यानडियन डलर) दाजु बिरबलले पठाएको जानकारी बिना लामाले दिइन् । ‘यो सहयोगका लागि दजु बिरवल र उहाँलाई बिश्वास गरेर सहयोग गर्नुभएको सम्पुर्ण दाजुभाइहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ रकम हस्तान्तरण गर्दै बिना लामाले भनिन् । बिना लामाले अफैले संचालन गरेको बिना सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रको तर्फबाट पनि छुट्टै ५ हजार रुपैयाँ बिरामीकै हातमा हस्तान्तरण गरेकी छिन् ।
साथै मलेसिया बाट सोही गाउँ पालुघाट टारका भिम बहादुर तामाङले पनि ५ हजार एक सय ५ रुपियाँ सहयोग गरेको छ । उक्त सहयोग रकम युथ फोरम पालुघाटका अभियानता सिंग बहादुर दोङले हस्तान्तरण गरिएको हो ।
भक्तपुर स्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा उपचाररत बिरामी रञ्जनालाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दा तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य कान्छ लामा, बिरामी रञ्जनाको बुबा कान्छमान तामाङ तथा युथ फोरम पालुघाटका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
छोरीलाई मृगौला दिन तयार छन् तर लाग्ने खर्च कसरी जुटाउने ?
बिरामी रञ्जनाको लागि किड्नी दिन बुबा र आमा दुबै जनाको जस्को मिल्छ त्यसैको दिन राजी भएको छ । सहयोग रकम हस्तान्तरण पश्चात् बिरामीको बुबा कान्छमान तामाङले सहयोगी सबैलाई धन्यवाद दिए । ‘सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद । मेरो आर्थिक अवस्थाले छोरीको उपचार गर्ने कुनै संभावना नै छैन । त्यसैले तपाईंहरुकै सहयोगको अपेक्षा छ । तपाइँहरुकै आशा र भरोसामा छु ।’ आफ्नो दुखेसो पोखे उनले । ‘हामी आमा बुबाको जसको मिल्छ उसको मृगौला छोरीको लागि दिन तयार छौं तर मेरो आफ्नो आर्थिक हैसियतले नभ्याउने भएकोले हजुरहरुसंग यो दुई हात जोडेर बिन्ती गर्न चाहन्छु । मेरो छोरीलाई बचाईदिनुहोस ।’ तामाङले आफ्नो बिन्ती बिसाएर ।
डाक्टरका अनुसार किड्नी ट्रान्सप्लान्टका लागि धेरै रकम आवस्यकता पर्ने भएको छ । तर परिवारको आर्थिक स्थितिले असम्भव रहेकाले हामी सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको छ । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै युथ फोरम पालुघाटले सहयोग अभियान संचालन गरिएको हो । यसमा क्यानडाबाट विरवल लामाले पहल गरिरहेको छ भने दक्षिण कोरियाबाट पदम दोङले अभियान चलाइरहेको छ । साथै विरवल लामा कै पहलमा gofund मार्फत पनि विश्वभरी रहेका मनकारी ब्यक्तिहरुले सहयोग गर्न सकिनेछ ।
अहिले सम्म सहयोग गरेका सम्पुर्णमा हार्दिक धन्यवाद सहित अन्य सहयोगी मनहरुमा सहयोगका लागि युथ फोरम पालुघाटले अनुरोध गरेको छ ।
विश्वभरीका सहयोगीहरुले सहयोग गर्न दिएको लिङ्कमा जानुहोला ।
दक्षिण कोरियाबाट सहयोग गर्न
Lama padam bahadur/
A/c no. 22142398102011
नेपालमा सिधै सहयोग गर्न
मुक्तिनाथ बिकास बैक – 04021600330003000001)